တရားစီရင်ရေးကို ဒေါင်းတို့မျိုးဆက် သံချပ်အဖွဲ့ဝင်တွေ သပိတ်မှောက်မယ် - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
တရားစီရင်ရေးကို ဒေါင်းတို့မျိုးဆက် သံချပ်အဖွဲ့ဝင်တွေ သပိတ်မှောက်မယ်
တပ်မတော်က တရားစွဲဆိုထားတဲ့ ကျန်အမူတွေအတွက် တရားရုံးနဲ့ မပူးပေါင်းတော့ဘဲ တရားစီရင်ရေးကို သပိတ်မှောက်မယ်လို့ ဒေါင်းတို့မျိုးဆက် သံချပ်အဖွဲ့ဝင်တွေက ဒီဇင်ဘာ ၁၁ရက်နေ့ ရုံးထုတ်မှာ ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ကို တပ်မတော်က တရားစွဲဆိုတာ ရှစ်မူရှိတယ်။ သုံးမူ အမိန့်ချပြီးသွားပြီ။ အဲဒါကတော့ နှစ်နှစ်နဲ့ ခြောက်လ။ နောက်ထပ် ငါးမူကျန်သေးတယ်။ တပ်မတော်က တရားလိုစွဲဆိုထားတဲ့ ငါးမှုကို သပိတ်မှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ အမူတွေ အားလုံးကို တရားရုံးနဲ့လည်းပူးပေါင်းမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။”လို့ဒေါင်းတို့မျိုးဆက်သံချပ်အဖွဲ့ဝင် ကိုပိုင်ရဲသူက မရမ်းကုန်းတရားရုံး အမိန့်ချပြီး အထွက်မှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
“ တရားစီရင်ရေးကိုလည်း သပိတ်မှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သပိတ်မှောက်တဲ့အခါ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)နဲ့၆၆(ဃ) တို့ အမူတွေမှာ ကျင့် (၂၀၂) မစစ်ဆေးခဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့ကို တရားရုံးတင်ပြီးတော့ စစ်ဆေးခဲ့တယ်။ အဲလို မစစ်ဆေးခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ကိုငြိမ်းချမ်းစိုး(ချစ်ယုံ)က ထောင်မှာ ခြောက်လလောက်နေခဲ့ရတယ်။ အမိန့်ချခါနီးမှ သူမပါမှန်းသိပြီးတော့ ပြန်လွှတ်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီအတွက် နစ်နာတယ်။ ပြီးတော့ ၆၆(ဃ)နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ လူမူကွန်ရက်ပေါ်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့ တရားစွဲထားတယ်။ ပြစ်မူတစ်ခုကို ပြစ်ဒဏ်ထပ်ခါထပ်ခါ ချလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ ပြစ်မူတစ်ခုကို ပြစ်ဒဏ်တွေ ထပ်ခါထပ်ခါချနေတယ်။ အဲဒီ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ တရားရုံးကို သပိတ်မှောက်ပါမယ်” လို့လည်း ကိုပိုင်ရဲသူက ထည့်သွင်းပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒေါင်းတို့မျိုးဆက် သံချပ်အဖွဲ့ကို သံချပ်ထိုးတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး တပ်မတော်က တရားလိုပြုလုပ်ပြီး နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ - ၅၀၅(က) / ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ - ၆၆(ဃ) တို့နဲ့ တရားစွဲထားပြီး အခု အမှုစုစုပေါင်း (၈) မှုရှိပါတယ်။ လောလောဆယ် သုံးမှုကို အပြစ်ရှိတယ်လို့ တရားရုံးတွေက ဆုံးဖြတ်ပြီး အလုပ်နဲ့ ထောင်ဒဏ်တွေ ချမှတ်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်းထောင်ဒဏ် (၂) နှစ်နဲ့ (၆) လ ချမှတ် ခံထားရဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါင်းတို့မျိုးဆက် သံချပ်အဖွဲ့ဝင် ကိုဇေယျာလွင်၊ ကိုပိုင်ရဲသူ၊ ကိုပိုင်ဖြိုးမင်း (ခ) ဒီရေ နှင့် မဆုရတနာမြင့် တို့ (၄) ဦးကို မရမ်းကုန်းမြို့နယ် တရားရုံးက ဒီဇင်ဘာ ၁၁ရက်နေ့မှာတရားရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးတော့ ပုဒ်မ - ၆၆(ဃ) နဲ့ ထောင်ဒဏ် (၆) လ ထပ်မံ ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
“အရင်တုန်းက တရားရုံးတွေနဲ့ ပူးပေါင်းခဲ့တယ်။ တရားမျှတမူကို မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့ လိုချင်တဲ့ တရားမျှတမူကို တရားရုံးတွေကလည်း မပေးဘူး။. တရားသူကြီးကလည်း မပေးဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့က တရားစီရင်ရေးစနစ်ကို ဆက်ပြီးတော့ မပူးပေါင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်မတို့ကို စွဲဆိုတဲ့ထားတဲ့ ကျန်ပုဒ်မတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ တရားရုံးတွေနဲ့ ဆက်ပြီးတော့ မပူးပေါင်းတော့ဘူး။ တရာစီရင်ရေးကို သပိတ်မှောက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်”
ဒေါင်းတို့မျိုးဆက်သံချပ်အဖွဲ့ဝင် မဆုရတနာမြင့်က မရမ်းကုန်းတရားရုံး အမိန့်ချပြီး အထွက်မှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် တရားရုံးက ပုဒ်မ - ၅၀၅(က) နဲ့ထောင်ဒဏ် (၁) နှစ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် တရားရုံးက ပုဒ်မ - ၅၀၅(က) ဖြင့် ထောင်ဒဏ် (၁) နှစ်နဲ့ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် တရားရုံးကပုဒ်မ - ၆၆(ဃ) နဲ့ ထောင်ဒဏ် (၆) လ စုစုပေါင်း (၂) နှစ် (၆) လ ကိုချမှတ်ခံထားရပြီးတော့ ကျန်ရှိသော အမှုတွေကို ဆက်လက် ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ ဒေါင်းတို့မျိုးဆက် သံချပ်အဖွဲ့က ပြောကြပါတယ်။
တရားစီရငျရေးကို ဒေါငျးတို့မြိုးဆကျ သံခပျြအဖှဲ့ဝငျတှေ သပိတျမှောကျမယျ
တပျမတျောက တရားစှဲဆိုထားတဲ့ ကနျြအမူတှအေတှကျ တရားရုံးနဲ့ မပူးပေါငျးတော့ဘဲ တရားစီရငျရေးကို သပိတျမှောကျမယျလို့ ဒေါငျးတို့မြိုးဆကျ သံခပျြအဖှဲ့ဝငျတှကေ ဒီဇငျဘာ ၁၁ရကျနေ့ ရုံးထုတျမှာ ပွောဆိုခဲ့ကွပါတယျ။
“ကြှနျတျောတို့ကို တပျမတျောက တရားစှဲဆိုတာ ရှဈမူရှိတယျ။ သုံးမူ အမိနျ့ခပြွီးသှားပွီ။ အဲဒါကတော့ နှဈနှဈနဲ့ ခွောကျလ။ နောကျထပျ ငါးမူကနျြသေးတယျ။ တပျမတျောက တရားလိုစှဲဆိုထားတဲ့ ငါးမှုကို သပိတျမှောကျမှာဖွဈပါတယျ။ ကနျြတဲ့ အမူတှေ အားလုံးကို တရားရုံးနဲ့လညျးပူးပေါငျးမှာ မဟုတျတော့ဘူး။”လို့ ဒေါငျးတို့မြိုးဆကျသံခပျြအဖှဲ့ဝငျ ကိုပိုငျရဲသူက မရမျးကုနျးတရားရုံး အမိနျ့ခပြွီး အထှကျမှာ ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
“ တရားစီရငျရေးကိုလညျး သပိတျမှောကျမှာဖွဈပါတယျ။ သပိတျမှောကျတဲ့အခါ ပုဒျမ ၅၀၅(က)နဲ့၆၆(ဃ) တို့ အမူတှမှော ကငျြ့ (၂၀၂) မစဈဆေးခဲ့ပဲ ကြှနျတျောတို့ကို တရားရုံးတငျပွီးတော့ စဈဆေးခဲ့တယျ။ အဲလို မစဈဆေးခဲ့တဲ့ အတှကျကွောငျ့မို့လို့ ကိုငွိမျးခမျြးစိုး(ခဈြယုံ)က ထောငျမှာ ခွောကျလလောကျနခေဲ့ရတယျ။ အမိနျ့ခခြါနီးမှ သူမပါမှနျးသိပွီးတော့ ပွနျလှတျခဲ့ရတယျ။ အဲဒီအတှကျ နဈနာတယျ။ ပွီးတော့ ၆၆(ဃ)နဲ့ပတျသကျပွီးတော့ လူမူကှနျရကျပျေါတငျတယျဆိုပွီးတော့ တရားစှဲထားတယျ။ ပွဈမူတဈခုကို ပွဈဒဏျထပျခါထပျခါ ခလြို့မရဘူးဆိုပွီးတော့ ပွဈမူတဈခုကို ပွဈဒဏျတှေ ထပျခါထပျခါခနြတေယျ။ အဲဒီ့အတှကျ ကြှနျတျောတို့ တရားရုံးကို သပိတျမှောကျပါမယျ” လို့လညျး ကိုပိုငျရဲသူက ထညျ့သှငျးပွောခဲ့ပါတယျ။
ဒေါငျးတို့မြိုးဆကျ သံခပျြအဖှဲ့ကို သံခပျြထိုးတာနဲ့ ပကျသကျပွီး တပျမတျောက တရားလိုပွုလုပျပွီး နိုငျငံတျော အကွညျညိုပကျြစမှေု ပုဒျမ - ၅၀၅(က) / ဆကျသှယျရေး ဥပဒေ ပုဒျမ - ၆၆(ဃ) တို့နဲ့ တရားစှဲထားပွီး အခု အမှုစုစုပေါငျး (၈) မှုရှိပါတယျ။ လောလောဆယျ သုံးမှုကို အပွဈရှိတယျလို့ တရားရုံးတှကေ ဆုံးဖွတျပွီး အလုပျနဲ့ ထောငျဒဏျတှေ ခမြှတျခဲ့ပွီး စုစုပေါငျးထောငျဒဏျ (၂) နှဈနဲ့ (၆) လ ခမြှတျ ခံထားရဖွဈပါတယျ။
ဒေါငျးတို့မြိုးဆကျ သံခပျြအဖှဲ့ဝငျ ကိုဇယြောလှငျ၊ ကိုပိုငျရဲသူ၊ ကိုပိုငျဖွိုးမငျး (ခ) ဒီရေ နှငျ့ မဆုရတနာမွငျ့ တို့ (၄) ဦးကို မရမျးကုနျးမွို့နယျ တရားရုံးက ဒီဇငျဘာ ၁၁ရကျနမှေ့ာတရားရုံးထုတျခဲ့ပွီးတော့ ပုဒျမ - ၆၆(ဃ) နဲ့ ထောငျဒဏျ (၆) လ ထပျမံ ခမြှတျခဲ့ပါတယျ။
“အရငျတုနျးက တရားရုံးတှနေဲ့ ပူးပေါငျးခဲ့တယျ။ တရားမြှတမူကို မြှျောလငျ့ခဲ့တယျ။ဒါပမေဲ့ ကြှနျမတို့ လိုခငျြတဲ့ တရားမြှတမူကို တရားရုံးတှကေလညျး မပေးဘူး။. တရားသူကွီးကလညျး မပေးဘူး။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျမတို့က တရားစီရငျရေးစနဈကို ဆကျပွီးတော့ မပူးပေါငျးဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ။ ကြှနျမတို့ကို စှဲဆိုတဲ့ထားတဲ့ ကနျြပုဒျမတှနေဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ တရားရုံးတှနေဲ့ ဆကျပွီးတော့ မပူးပေါငျးတော့ဘူး။ တရာစီရငျရေးကို သပိတျမှောကျမယျလို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ကွတယျ”
ဒေါငျးတို့မြိုးဆကျသံခပျြအဖှဲ့ဝငျ မဆုရတနာမွငျ့က မရမျးကုနျးတရားရုံး အမိနျ့ခပြွီး အထှကျမှာ ပွောခဲ့ပါတယျ။
လကျရှိမှာ မရမျးကုနျးမွို့နယျ တရားရုံးက ပုဒျမ - ၅၀၅(က) နဲ့ထောငျဒဏျ (၁) နှဈ၊ ဗိုလျတထောငျမွို့နယျ တရားရုံးက ပုဒျမ - ၅၀၅(က) ဖွငျ့ ထောငျဒဏျ (၁) နှဈနဲ့ မရမျးကုနျးမွို့နယျ တရားရုံးကပုဒျမ - ၆၆(ဃ) နဲ့ ထောငျဒဏျ (၆) လ စုစုပေါငျး (၂) နှဈ (၆) လ ကိုခမြှတျခံထားရပွီးတော့ ကနျြရှိသော အမှုတှကေို ဆကျလကျ ရငျဆိုငျနရေတယျလို့ ဒေါငျးတို့မြိုးဆကျ သံခပျြအဖှဲ့က ပွောကွပါတယျ။